Masheya mune an uptrend | Ehupfumi Zvemari
Imwe yemakiyi ekuita mari yakanaka inoshanduka kuburikidza nekutenga kwekuchengetedzeka kuri kumusoro. Parizvino, hapana zvakawanda zvakataurwa zveSpanish equities izvo zvinopa aya akasarudzika maitiro. Asi zvinodikanwa kuti uzvione nekuti, kunze kwezvose, ivo ndivo vane yepamusoro yekutenda kugona. Mune zvimwe zviitiko ne dhisikaundi kutenderedza 20% kana 30% uye izvo zvinoumba chaiwo mabhizinesi mikana yekuita kuti mari yakadyarwa ibatsire.
Maitiro ekukwira kumusoro anoreva kuti kukwira kwemitengo kuchachengetwa kwenguva isinganyanyisa. Asi zvinopesana, ivo vanogona kuwedzerwa kwemwedzi yakati wandei kana kunyangwe makore mune akajeka kesi. Iko iko chimiro che sununguka kusimuka ndiyo inobatsira zvakanyanya kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Pakati pezvimwe zvikonzero zvekukosha kwakadai senge kuti havasisina kuramba pamberi. Iko hakuna miganho kune ayo anogona kuongororwa.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iyi kirasi yemitengo iri mune yakajeka kumusoro kumusoro ndiyo iyo inofanirwa kuverengerwa mune yedu inotevera portfolio portfolio. Nekuti pasina kupokana pane zvakawanda zvekuwana pane kurasikirwa. Mune zvimwe zviitiko nekukwira kumusoro uko kunogona kuve kunonakidza kune vese vadiki nepakati varimi. Zvirinani kudzamara kutsika kwenyaya yemamwe maitirwo aripo mumari yenyika akapera. Tevere isu tichaenda kukufumura iwe zvimwe zvezvisungo zvine hunhu zvakanyatsotsanangurwa uye izvo zvinogona kuve chinhu chekutenga.
1 Bullish maitiro: Ferrovial
2 Endesa mukumuka kwemahara
3 Iberdrola uye kufarira kwemakambani emagetsi
4 ACS, ine kumuka isingamire
5 Solaria kunze kweIbex 35
Bullish maitiro: Ferrovial
Imwe yemitengo yemari yeSpain iyo ine yakanakisa hunyanzvi parizvino iyi kambani yekuvaka. Kwete zvisina maturo, uye zvinoenderana nevanoongorora zvemari vazhinji zvine kukosha kwakanyanya kumusoro mumwedzi iri kuuya. Uine upside zvinogona iyo inopfuura 20%. Kune izvi zvinowedzerwa chokwadi chezvitsva izvo kambani yakasaina mumwedzi ichangopfuura. Kune rimwe divi, iro zvakare rine mukuda kwaro kuwedzera kwemigwagwa nemitengo munyika dzavakagadzika mutsara webhizinesi. Nekufarira kuri kukura kune chikamu chevashambadzi vadiki nepakati vanoona mune ino yakanyorwa kambani imwe yeakanakisa mazano ekuti kuchengetedza kwavo kubatsire munguva pfupi nepakati.
Endesa mukumuka kwemahara
Iyo ndiyo inodiwa yevanonyanya kuzvidzivirira kana vanochengetedza mari. Iwe haugone kukanganwa kuti iwe wakapinda mumazuva achangopfuura chimiro chakanakisa icho kukosha kwemusika wekutengesa kunogona kuve nako, iko kwekusununguka kusununguka. Iine rwendo rurefu kumusoro uye pakati pezvimwe zvikonzero nekuti haisisina kuramba pamberi. Muchidimbu, garandi kuitira kuti zvikamu zvayo zvirambe zvichikoshesa zvakare gore rino. Mupfungwa iyi, hazvigone kukanganwika kuti kambani yemagetsi yaive imwe yemakambani akawedzera zvakanyanya mukati megore remari rapfuura. Iine purofiti yegore rose inopfuura 20% uye ne dividend kufarira iyo iri kutenderera 7%, imwe yepamusoro yakaparadzirwa nemakambani akanyorwa mune yakasarudzika indekisi yemari yenyika, iyo Ibex 35.
Iberdrola uye kufarira kwemakambani emagetsi
Ndiyo imwe kambani yemagetsi yakafumura kufarira kune vanoita zvidiki nepakati varimi. Izvo zvakare zviri mune yekusununguka yemahara, yakanakisa iyo mutengo wemusika unogona kuva nayo uye kubva kune kumwe kuongorora zvakare kunotarisirwa kubva zvino zvichienda mberi. Uyezve, inopawo inofungidzirwa kumusoro kumhanya kutenderera 18%Sekureva kwevaongorori vezvemari, zvinogona kuoneka mukati menguva pfupi kwazvo yekutengesa pamatanho ari padyo ne8 euros pamugove. Imwe yehunhu hwayo hwakawedzerwa irimo muchokwadi chekuti kune chizvarwa chikuru chemari uye ichi ichokwadi chinogona kuve chakakosha kwazvo kusimudzira kukwira kutsva mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
ACS, ine kumuka isingamire
Mukati meakakosha chikamu chekuvaka pane kukosha kunopa iyo isina chakasarudzika hunyanzvi chitarisiko. Tiri kutaura nezve ACS, iri parizvino kutengesa kuma 36 euros pamugove. Asi icho chakakosha chaizvo ndechekuti mumavhiki anotevera inogona kuenda kuma40 euros. Iko iko kunopesana kukuru kwekuita zvinangwa zvekuda zvikuru. Iko kuchengetedzwa kunofanirwa kutengwa, mune ese magariro: mapfupi, ari pakati nepakati. Iri kuratidza simba rakawonekwa zvishoma mumitengo yakasara yeiyo yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Ino vimbisa kusimba manzwiro kubva zvino zvichienda mberi. Kuti uvewo nazvo mune yako portfolio.
Solaria kunze kweIbex 35
Iyi yakanyorwa kambani inogona zvakare kuve imwe yeiyo kushamisika kukuru mugore rino rekutengesa. Ehezve, kana izvo zvauri kutsvaga chiri chisinga tsanangurike uprendre, hapana mubvunzo kuti sarudzo iyi inogutsa zvaunoda kuita kuitira kuchengetedza kunobatsira pamwe nezvivimbiso zvikuru zvekubudirira. Chero zvazvingava, iine chakanyanya kudzoka uye izvo ndezvekuti yakatodzoserwa kukosha zvakanyanya uye nesimba rakakura. Uye chero nguva, hauzove nesarudzo kunze kwekugadzirisa nzvimbo dzako uye chokwadi ichi chinogona kukonzeresa kukanganisa kukuru mune yako portfolio. Naizvozvo, yakawanda yambiro paunovhura nzvimbo mune ino diki-chivharo chengetedzo. Zvisinei nekuti hunyanzvi hwayo hwakanakisa pane ese magariro: mapfupi: ari pakati nepakati.
Sezvaungave iwe waona, kune akawanda mikana yebhizinesi yakavhurwa iwe kune ino nyowani kutenderera muSpanish equities Iye zvino iwe chete unofanirwa kusarudza iyo kukosha inokodzera kwazvo chimiro chaunopa sewe mudiki uye wepakati investor. Uye zvechokwadi rimwe rombo rakanaka kuperekedza sarudzo dzauchazoita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuchengetedzwa mukukwira
Dzimwe nzira ina dzehomwe
Chengetedzo nyowani pamusika weSpanish wemusika